Ra’iisul wasaaraha Jarmalka oo booqaneysa Turkiga – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha Jarmalka oo booqaneysa Turkiga
Chancellor ka dalka Jarmalka, Angela Merkel iyo saraakiil sare oo ka tirsan Midowga Yurub ayaa booqasho ku tagaya magaalada Gaziantep oo ku taala xuduudka Turkiga iyo Suuriya, si loo horumariyo heshiiskii bilk a hor ay wada galeen midowga Yurub iyo Turkiga.
Ra’iisul wasaaraha dalka Jarmalka, ayaa safarkeeda waxaa ku wehliya madaxweynaha golaha midowga Yurub, Donald Tusk iyo Frans Timmermans. Ku xigeenka guddiga Midowga Yurub, waxayna halkaas kula kulmi doonaan ra’iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmet Davutoglu oo ay kala hadli doonaan meel marinta heshiiska muranka badan dhaliyay.
Saraakiishan ka socda Midowga Yurub ka socoto oo ay hogaamineyso Chancellor Angela Merkel ayaa waxa ay booqadan doonaan xero oo ay ku jiraan dadka xaqootiga ka soo jeeda dalka Syria, taasi oo ku taalo magaalada Gaziantep.
Saraakiisha Turkiga ayaa ku hanjabay in heshiiska ay ka bixi doonaan haddii waxyaabihii lagu heshiiyay sidooda loo fulin waayo oo ay kamid aheyd in muwaadiniinta Turkiga ay dal u gal la’aan ku safri karaan guud ahaan wadamada midowga Yurub kaas oo aan wali dhaqan gelin.
Heshiiskan ayaa waxaa ka soo horjeestay hay’adaha xuquuqda aadanaha oo ku tilmaamay in uu yahay mid xad gudub ku ah xuquuqul insaanka.
Beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo dib u bilaabay tabcashada beerahooda “SAWIRRO”